5263 3-Marxalad oo hoos timaada Nidaamka Osmosis Dib-u-noqoshada Qoyska oo aan Lahayn
Tanks -ka Shiinaha ee dib -u -celinta nidaamka sifeynta osmosis wuxuu hubiyaa biyo macaan oo joogto ah.
Wuxuu ka saaraa inta badan wasakhaynta oo ay ku jiraan TDS, biraha culus, bakteeriyada biyaha tubbadaada.
Kartoonka shaandhaynta hal mar la isticmaalo ayaa badbaadiya wakhtigaaga nadiifinta kana fogaada wasakhda labaad.
2 in 1 kaydadka shaandhaynta is haysta, badbaadi meesha aad ku qubeysato oo aad si fudud u beddeli karto curiyaha.
Shaandhada nolosha shaandhayso oo dib u dejiso, si fudud u hubi goorta aad beddeli doonto shaandhayntaada.
Wax ku ool ah ayaa biyaha ka saarta bakteeriyada, jeermisyada iyo walxaha kale ee aan loo baahnayn.
Astaamaha 0.01μm xuub ultrafiltration si loo hubiyo 99.99% heerka dhimista.
Iyada oo shaandhaynta biyaha xuubka UF waxay ku hayn kartaa biyaha macdanaha faa'iidada leh si loo ilaaliyo jirdhiskaaga.
Heerka qulqulka sare ilaa 2.5L/min (qiyaastii 0.66gpm), ku raaxayso biyaha joogtada ah arji kala duwan.
Daaweynta Biyaha ee Ultraviolet waxay caawisaa ballaarinta baaxadda waxqabadkeeda.
5762-PF5A Waajib culus oo dib loo isticmaali karo Guriyeynta Biyaha Guryaha oo dhan
Nidaamka nadiifinta biyaha ee wax -ku -oolka ah ee guryaha ama xafiisyada la deggan yahay, gaar ahaan loogu talagalay in laga soo qaado walxo waaweyn oo biyo ah, ka ilaaliya qalabka iyo tuubooyinka tuubada.
Ku habboon 4.5 "× 10" PP / warqad jilicsan / shaandhaynta nabarka si loo yareeyo wasakhda, miridhku, ciid, wasakh, algae, colloids, gooryaan cas, iwm.
Waxay leedahay sifooyin aad u adkaysi leh oo leh NSF-ka la hubiyay guryaha shaandhaynta
Kartigyadeenna shaandhaynta beddelka ah ee 4.5-ka ah ayaa si gooni ah loo iibin karaa ama waxay la imaan kartaa nidaamka.
5269 2-Marxalad Hoos-u-Dhigista Nidaamka Dib-u-Celinta Osmosis-ka
Qalab aad u fiican oo meel-badbaadin ah oo ku habboon meel kasta oo lagu qubeysto.
Nidaamku wuxuu bixin karaa qulqul biyo degdeg ah (ilaa 600 gallon maalintii), isagoo shaandhaynaya koob (200ml) 8 ilbidhiqsi.
Waxqabadka shaandhaynta weyn oo leh laba walxood oo shaandhayn ah oo keliya, oo u fudud DIY oo ku keydso meel godka hoostiisa ah.
Biyuhu waxay leeyihiin laba xarumood oo si fudud loogu beddeli karo biyaha nadiifta ah ee loo isticmaalo maalin kasta iyo biyaha saafiga ah ee la cabi karo.
Biyo -raac buuxa oo otomaatig ah ayaa la bixiyaa waqtiyo joogto ah si loo dhaqo wasakhda la uruuriyay iyo in xuubku nadiif ahaado.
5290 Waxtarka Sare ee Dib -u -noqoshada Guriga oo dhan Nidaamka Sifaynta Biyaha ee dib loo isticmaali karo
Nidaamka nadiifinta biyaha ee wax -ku -oolka ah ee guryaha ama xafiisyada la deggan yahay, gaar ahaan loogu talagalay in laga soo qaado walxo waaweyn oo biyo ah, ka ilaaliya qalabka iyo ka -soo -daadinta wasakhda.
Adeegso mesh birta birta ah si aad u yareyso wasakhda, miridhku, ciid, wasakhda, algae, colloids, gooryaanka cas, iwm.
Caafimaadka-fasalka 316 mesh birta birta ah ayaa hubin kara saxnaan sare iyo waxqabadka sifeynta oo ka sii wanaagsan.
Guriyeynta laga sameeyay polymer waxay ka hortagi kartaa qarax iyo baraf.
Wax -ku -oolnimo sare oo leh qulqulka biyaha ee 3 tan saacaddii (cadaadis ah 0.3MPa).
5676 Hufnaan Sare Hab -biyoodka Guriga oo Dhan oo La Isticmaali Karo
Wax -ku -oolnimo sare oo leh socodka biyaha 3 tan saacaddii.
5766 Heerka Waajibka ah ee Dib -loo -isticmaali karo Guriga Biyaha sifeeya oo dhan
Ku habboon 2.5 ”× 10” PP / warqadda jilicsan / shaandhaynta nabarrada si loo yareeyo wasakhda, miridhku, ciid, wasakh, algae, colloids, gooryaan cas, iwm.
Kartigyadeenna shaandhaynta beddelka ah ee 2.5-ga ah ayaa si gooni ah loo iibin karaa ama waxay la imaan kartaa nidaamka.
5450 Nidaamka Sifaynta Biyaha Dhexe
Hel biyo nadiif ah oo caafimaad leh si loo yareeyo wasakheynta biyaha ee cabbitaanka qoyska, karinta, maydhashada, dhar dhaqidda iyo baahiyaha kale.
Wuxuu adeegsadaa kaarboonka qolofta qumbaha iyo KDF -ta qaaliga ah si uu si hufan u shaandheeyo koloriin hadhay, biro culus iyo wasakhayn kale oo aan loo baahnayn.
Maaddada heerka cuntada waxay hubisaa badbaadada iyo caafimaadka qaybaha qoyan.
Wuxuu qaataa hal-taabasho qaab-dhismeed baasaboor ah si loogu oggolaado is-beddel bilaash ah oo u dhexeeya biyaha la sifeeyay iyo biyaha tubbada.
5451 Nidaamka Sifaynta Biyaha Dhexe
5460 Dejiye Biyaha Dhexe ee Degaanka
Wuxuu isticmaalaa cusbi isweydaarsiga ion si uu si wax ku ool ah u shaandheeyo kalsiyum iyo ion magnesium si uu u bixiyo dareen raaxo leh oo biyo ah.
Wuxuu qaataa hal-taabasho qaab-dhismeed baasaboor ah si loogu oggolaado is-beddel bilaash ah oo u dhexeeya biyaha jilicsan iyo biyaha tuubada.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso goobaha adkaanta biyaha iyadoo loo eegayo baahiyahaaga.
5461 Jilciyaha Biyaha Dhexe ee Degaanka
5687/5688 3-Marxalad Hoos-u-dhigid Nidaamka Osmosis Dib-u-noqoshada Qoyska
Sifaynta biyaha dhaqaalaha oo ka saarta inta badan wasakhaynta oo ay ku jiraan TDS, biraha culus, bakteeriyada ku jirta biyaha qasabaddaada.
Waxyaalaha caagga ah ee heerka cuntada ah waxay hubiyaan biyo la cabo oo saafi ah oo aan wasakhaysan.
ASO Piston -ka qaab -dhismeedkiisa patent -ka ah wuxuu la kulmi karaa heerka socodka biyaha yar ee korontada ka go'an.
Qaabka 75GPD wuxuu la yimaadaa haanta biyaha ee 3GPD.
Kaydadka shaandhaynta, Nidaamka Dib -u -noqoshada ugu Wanaagsan, Beddelka Shaandhada Biyaha Kaydadka Biyaha, Biyo -nadiifiye Biyaha Adag, Taabo Nidaamka Shaandhaynta Biyaha, Guryaha Biyaha Sifeeya,